किन खर्च भएन दाताले दिएको ४० अर्ब रुपैयाँ ? यस्तो छ भित्री कारण ! | suryakhabar.com
Home आर्थिक किन खर्च भएन दाताले दिएको ४० अर्ब रुपैयाँ ? यस्तो छ भित्री कारण !
on: ७ श्रावण २०७४, शनिबार ०६:५३ In: आर्थिकTags: किन खर्च भएन दाताले दिएको ४० अर्ब रुपैयाँ ? यस्तो छ भित्री कारण !No Comments
काठमाडौं । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।
शनिबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन ।
Tags: किन खर्च भएन दाताले दिएको ४० अर्ब रुपैयाँ ? यस्तो छ भित्री कारण !
काठमाण्डौ महानगर आफैले बनाउने भो धरहरा
७ श्रावण २०७४, शनिबार ०६:५३